Mpanamboatra sy mpamatsy salady plastika ambongadiny | Copak
Tsy maninona na dia misakafo trano fisakafoanana ianao na cafe na manana trano fivarotana enao, COPAK dia mahatsapa ho avonavona hanolotra anao plastika salady fitoeran hanampy anao hivarotra ny saladianao amin'ny famaranana matihanina kokoa. Safidy halainao tsara hanolorana sakafo mangatsiaka: tsara ihany koa amin'ny fanolorana fitsaboana mangatsiaka, ny karazana salady rehetra, ny mofomamy ary ny tsakitsaky.
Salady fitoeran-tsakafo / lovia salady azo atsimo / fonosana salady plastika / fitoeram-bary salady plastika,
Raha ny kaontenera salady plastika anay dia ny habetsahan'ny 12oz, 16oz, 24oz, 32oz no refy be mpividy indrindra. Ireo andinindininy dia toy ny voalaza etsy ambony. Ny fitaovana PET dia azo averina 100%.
Ankoatry ny plastika Salad container dia amboarina, azontsika atao ihany koa ny manampy ny fanamainana lovia salady amin'ny fitaovana hafa toy ny taratasy, PP sns. Saingy ny kaontenera salady PET dia vita amin'ny plastika maharitra voajanahary ka manome fiainana hafa amin'ny alàlan'ny fanodinana. Tsy misy solika io ary tsy misy fitaovana manimba mety hisy fiantraikany amin'ny atiny.
1, fitoeram-salady plastika mateza maharitra sy mazava: Ity fitoeran-javatra itondrana ity dia matanjaka sy mahatohitra vaky sy vaky. Tsy olana ny dia lavitra.
2. Mety amin'ny fitahirizana kojakoja sakafo toy ny paty, salady, hena hena, hazan-dranomasina, sns. Ny fitoeran-tsakafo plastika mazava an'ny COPAK dia afaka mampiseho ny sakafonao amin'ny fahitana avo lenta, ary mahasarika mpanjifa bebe kokoa ho anao izany.
3. Ny fitoeran-tsakafo salady plastika an'ny COOPAK dia mety amin'ny tolotra mora ary miaraka amin'ny sarony izay manisy tombo-kase tsara ny vilia baolina. Manisy tombo-kase henjana ny fitehirizana legioma tsara kokoa. Tsy misy famoahana. Vita amin'ny plastika azo ampiasaina izy io ary misy fonony mangarahara izay mampiroborobo ny fahitana ny vokatra sy ny varotra.
4.MIHAASA SADY EO NA INDRINDRA - Omano ny salady tianao indrindra avy amin'ireo akora tsara indrindra azonao amin'ny tranonao ary ankafizo amin'ny birao na eny am-pandehanana.
5. TSY MAZAVA! - Manary fotsiny vao vita; Tsy mila manasa sy mitondra mody mody any an-trano. Fa sariaka ny Eco ary azo averina simba tanteraka.
Teo aloha: Kaontenera PET Deli
Manaraka: Tompondakan'ny PET Portion
Kopa vita amin'ny plastika vita pirinty
Kitapo plastika PET 12oz vita pirinty 92mm
Cup mazava PET
Mpanamboatra Cup Cup